माधव नेपाललाई ओलीको जवाफ-पूर्वराजाको पाउमा दाम राखेर ढोग्ने मान्छे केपी ओली होइन - Narayanionline.com Narayanionline.com माधव नेपाललाई ओलीको जवाफ-पूर्वराजाको पाउमा दाम राखेर ढोग्ने मान्छे केपी ओली होइन - Narayanionline.com
माधव नेपाललाई ओलीको जवाफ-पूर्वराजाको पाउमा दाम राखेर ढोग्ने मान्छे केपी ओली होइन
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रतिक्रियावादीहरूको अघि नझुक्ने बताएका छन् । शुक्रबार अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीको प्रथम विस्तारित बैठकमा उनले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको राजासँग भेट्ने गरेको अभिव्यक्तिको जवाफ दिए ।
“अब केपी ओली राजासँग मिल्छ रे ! कहाँ छ राजा ? राजासँग मिल्छ ? कस्तो बुद्धि यिनीहरूको ?,” ओलीले भने,“ कस्तो मानसिकता यिनीहरूको ? म सम्झाउन चाहन्छु वरिपरि परिक्रममा गरे पाउमा दाम राखेर ढोग्ने मान्छे केपी ओली होइन ।” केहीअघिको कार्यक्रममा नेपालले ओली गठबन्धन गर्न राजालाई भेट्न निवास पुग्ने गरेको आरोप लगाएका थिए ।